Gooseberry beerto | December 2019
Noocyada beeritaanka iyo daryeelidda miro-geedka beertaada
Editor Ee Doorashada December 7,2019
Ugu Weyn Ee Gooseberry beerto
Gooseberry waa noocyo ka mid ah caleemaha Smorodinovye Gooseberry ee qoyska. Warshadu waxay asal ahaan ka soo jeeddaa Afrika, sidoo kale waxay ku kortay duurka Europe, Kawaanka, Aasiya iyo Ameerika. Ma taqaanaa? Miro yar oo Yurub ah ayaa caan ku noqday qarnigii 16aad, 17kana waxa uu noqday mid ka mid ah midhaha ugu caansan England. Laga soo bilaabo wakhtigaas, shaqo-xulashada ayaa bilaabay inay hagaajiso Beelaha gooseberry.
Florarium do-it-yourself: sida loo sameeyo beer yar-yar oo galaas ah
Dhammaan faahfaahinta diblomaasiyadaha sii kordhaya ee guriga
Cinnabar, Nobilis, Gardena noocyada ugu quruxda badan. Tilmaanta, sawirada iyo daryeelka dhirta
Gawaarida qashinka loo yaqaan 'Homemade eggplant roses': waa sawir leh tallaabo tallaabo tallaabo ah
Sida loo faafiyo royal ah ee royal ee guriga
Baradho sii kordhaya laga bilaabo abuur
Teknoolojiyada sii kordhaya ee barafka Holland
Daryeelka xilliga maskaxda
Waxaa jira waqtiyo marka qofku go'aansado in uu cunnooyinka maalinlaha ah ku soo galo cunto kasta oo cunto ah si loo hagaajiyo xaaladda guud ee jidhka oo lumiyo miisaanka. Sida ugu macquulsan, saladh-yar oo saladh ah oo ku salaysan kaabash Shiinaha ayaa la qabsan doona yoolalkaas. Khudradda cagaaran waxaay kicisaa nafaqada waxayna jidhka ku buuxisaa macdanta iyo walxaha raadraaca. Read More
Ilaa intee le'eg ayaa caano badiyaa riyadu bixiyaan maalin kasta
Clematis xeerarka soo degaya "Ernest Markham"
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Gooseberry beerto 2019